digital marketing agency in myanmar Archives - DigitalMarketing.com.mm
Tag: digital marketing agency in myanmar
What is SEO and How it works in Myanmar
SEO/ Search Engine Optimization ဆိုတာဘာလဲ? – One Sentence Definition Search Engines (Google, Bing, Yahoo) စတာတွေမှာ ဝယ်သူတွေ သိချင်တာကိုရှာဖွေတဲ့အခါ သင့် Website ကိုတွေ့ရှိပြီး ဝင်ရောက်လာဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သိချင်တာရှိလို့ Google မှာရှာဖွေတဲ့အခါ အထက်ပါပုံအတိုင်း Web Pages ပေါင်းများစွာ ထွက်ကျလာမှာပါ။ ဒီထွက်ကျလာတဲ့ Web Pages တွေအများကြီးထဲက သင်ဘယ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုဖြစ်လဲ? သေချာပါတယ်။ ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာမှ အပေါ်ဆုံး Website နှစ်ခုသုံးခုထဲကနေပဲ ရွေးချယ်မှာပါ။ ဒီလိုရွေးချယ်တာ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အောက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Web Pages ရဲ့ တည်နေရာပေါ် မူတည်ပြီး Click Rate ကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ […]